ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် ဆီးချိုရောဂါအကြောင်း သိကောင်းစရာ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ " သန္ဓေဆောင်ချိန် ဆီးချိုရောဂါ " ဆိုတာ ကလေးရော မိခင်မှာပါ ဆိုးဝါးတဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်စေတာမို့ ဘယ်လိုကာကွယ်ကြည့်ရင် ကောင်းမလဲဆိုတာလေး ဗဟုသုတ ဖတ်ကြည့်နော်။ ကျန်းကျန်းမာမာလေး မွေးဖွားလာဖို့က မိခင်တိုင်းရဲ့ ရည်မှန်းချက်မို့ သိတန်တာလေးတွေ သိထားတော့ သတိထား အရေးတယူ ဂရုစိုက်ပေးလို့ရတာပေါ့။
>> သန္ဓေဆောင်ချိန် ဆီးချိုရောဂါဆိုတာ ဘာလဲ?
အရင်က ကျန်းကျန်းမာမာရှိနေပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှ ကောက်ကာငင်ကာ ဆီးချို စတက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
>> ဘယ်လိုကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ ဖြစ်တတ်သလဲ?
● ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်ကတည်းက အဝလွန်နေသူတွေ
● ကိုယ်ဝန်ရှိလာပြီးမှ ကိုယ်အလေးချိန် တစ်ဟုန်တိုး တက်လာသူတွေ
● သန္ဓေဆောင်ချိန် ဆီးချိုရောဂါမျိုးရိုးရှိသူတွေ
● ဗိုက်အဆီပိုတွေ စုနေသူတွေမှာ အများဆုံး ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
>> သူ့ရဲ့ အကျိုးဆက်တွေက ဘာတွေလဲ?
● ရေမွှာရေ များတာ
● ကလေး အရမ်းကြီးထွားနေတာ
● မွေးပြီးချင်း ဆီးချို ထိုးကျတာ
● ကလေး အဖတ်မတင်တာ
● ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက်ရောဂါတွေ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
>> မဖြစ်အောင် ကာကွယ်လို့ရသလား?
မျိုးရိုးဗီဇတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ " သန္ဓေဆောင်ချိန် ဆီးချိုရောဂါ " ဟာ ရှောင်လို့မရပေမယ့် တခြားပြုပြင်လို့ရတာတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။
● ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အစားအစာကို ရွေးချယ်စားသောက်တာ
● အဝမလွန်စေဖို့ အဆီအအိမ့် ရှောင်တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင် မိမိကိုယ်မိမိ အဝမလွန်စေဖို့ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ကလေးယူဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့ ကျန်းမာသွက်လက်ဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းယူခြင်း၊ ဝိတ်ချခြင်းတွေကလည်း ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အားရှိအောင် အစားအသောက်၊ အဆီအဆိမ့်တွေ တွန်းစားတာနဲ့ အသီးအနှံနဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်ကိုသာ အဓိကထား စားသုံးတာ မတူပါဘူး။ ဝလို့အားရှိတယ်လို့ ယူဆတာဟာ မမှန်ကန်တဲ့ အသိဖြစ်ပြီး ကျစ်လျစ်ပြီး သန်မာနေတာကမှ တကယ့်ကျန်းမာခြင်းခြင်းအစစ် ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ရှိပြီလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ ဆီးချိုစစ်ဆေးခြင်း၊ အခါအားလျော်စွာ သွေးပေါင်ချိန်ခြင်းတွေ ပြုလုပ်ပြီး ဆီးချိုရောဂါကို ကြိုတင်သိရှိထားသလို ဝိတ်လျှော့ခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်းတွေ ပြုလုပ်ပြီး ကာကွယ်နိုင်သလောက် ကာကွယ်ထားသင့်ပါတယ်နော်။
ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ ဖွဈတတျတဲ့ " သန်ဓဆေောငျခြိနျ ဆီးခြိုရောဂါ " ဆိုတာ ကလေးရော မိခငျမှာပါ ဆိုးဝါးတဲ့အကြိုးဆကျတှဖွေဈစတောမို့ ဘယျလိုကာကှယျကွညျ့ရငျ ကောငျးမလဲဆိုတာလေး ဗဟုသုတ ဖတျကွညျ့နျော။ ကနျြးကနျြးမာမာလေး မှေးဖှားလာဖို့က မိခငျတိုငျးရဲ့ ရညျမှနျးခကျြမို့ သိတနျတာလေးတှေ သိထားတော့ သတိထား အရေးတယူ ဂရုစိုကျပေးလို့ရတာပေါ့။
>> သန်ဓဆေောငျခြိနျ ဆီးခြိုရောဂါဆိုတာ ဘာလဲ?
အရငျက ကနျြးကနျြးမာမာရှိနပွေီး ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှ ကောကျကာငငျကာ ဆီးခြို စတကျလာတာ ဖွဈပါတယျ။
>> ဘယျလိုကိုယျဝနျဆောငျတှေ ဖွဈတတျသလဲ?
● ကိုယျဝနျမဆောငျခငျကတညျးက အဝလှနျနသေူတှေ
● ကိုယျဝနျရှိလာပွီးမှ ကိုယျအလေးခြိနျ တဈဟုနျတိုး တကျလာသူတှေ
● သန်ဓဆေောငျခြိနျ ဆီးခြိုရောဂါမြိုးရိုးရှိသူတှေ
● ဗိုကျအဆီပိုတှေ စုနသေူတှမှော အမြားဆုံး ဖွဈလရှေိ့ပါတယျ။
>> သူ့ရဲ့ အကြိုးဆကျတှကေ ဘာတှလေဲ?
● ရမှောရေ မြားတာ
● ကလေး အရမျးကွီးထှားနတော
● မှေးပွီးခငျြး ဆီးခြို ထိုးကတြာ
● ကလေး အဖတျမတငျတာ
● ကိုယျဝနျဆိပျတကျရောဂါတှေ ဖွဈနနေိုငျပါတယျ။
>> မဖွဈအောငျ ကာကှယျလို့ရသလား?
မြိုးရိုးဗီဇတှကွေောငျ့ဖွဈတဲ့ " သန်ဓဆေောငျခြိနျ ဆီးခြိုရောဂါ " ဟာ ရှောငျလို့မရပမေယျ့ တခွားပွုပွငျလို့ရတာတှေ ရှိနပေါသေးတယျ။
● ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့အစားအစာကို ရှေးခယျြစားသောကျတာ
● အဝမလှနျစဖေို့ အဆီအအိမျ့ ရှောငျတာတှေ ဖွဈပါတယျ။
နောကျပွီး ကိုယျဝနျမဆောငျခငျ မိမိကိုယျမိမိ အဝမလှနျစဖေို့ ထိနျးခြုပျခွငျး၊ ကလေးယူဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတာနဲ့ ကနျြးမာသှကျလကျဖို့ လကေ့ငျြ့ခနျးယူခွငျး၊ ဝိတျခခြွငျးတှကေလညျး ထိထိရောကျရောကျ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
ဒီနရောမှာ အားရှိအောငျ အစားအသောကျ၊ အဆီအဆိမျ့တှေ တှနျးစားတာနဲ့ အသီးအနှံနဲ့ ပရိုတငျးဓာတျကိုသာ အဓိကထား စားသုံးတာ မတူပါဘူး။ ဝလို့အားရှိတယျလို့ ယူဆတာဟာ မမှနျကနျတဲ့ အသိဖွဈပွီး ကဈြလဈြပွီး သနျမာနတောကမှ တကယျ့ကနျြးမာခွငျးခွငျးအစဈ ဖွဈပါတယျ။
ကိုယျဝနျရှိပွီလို့ ဆိုလိုကျတာနဲ့ ဆီးခြိုစဈဆေးခွငျး၊ အခါအားလြျောစှာ သှေးပေါငျခြိနျခွငျးတှေ ပွုလုပျပွီး ဆီးခြိုရောဂါကို ကွိုတငျသိရှိထားသလို ဝိတျလြှော့ခွငျး၊ လမျးလြှောကျခွငျးတှေ ပွုလုပျပွီး ကာကှယျနိုငျသလောကျ ကာကှယျထားသငျ့ပါတယျနျော။